३० असोज, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ। संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा तयार पारिएका कोभिड अस्पताल अहिले तीव्र दरमा संक्रमित बढेपछि भर्ना लिएर उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले संक्रमितको अनुपातमा अस्पतालमा शड्ढया, उपकरण र जनशक्ति बिस्तार गर्न नसक्दा समस्या भएको हो। सात महिनाअघि तयार पारिएका कोभिड अस्पतालका संरचना संक्रमित सबा लाख पुग्न लाग्दा पनि उस्तै छन्।
उपचारै नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाइरहँदा र लक्षणसहितका संक्रमित थपिइरहँदा पनि प्रदेश सरकारले अस्पतालको क्षमता बिस्तारमा भने ध्यान दिएकै छैन। चैतमा तयार गरिएका संरचनामा नै अहिलेसम्म काम चलाइएको छ। सुरुमा एक सय बेडको भनेर प्रचार गरिएको बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा चारवटा भेन्टिलेटसहित १६ वटा आइसियू शड्ढया र ३२ वटा आइसोलेसन शड्ढया छन्। ती शड्ढया सबै भरिएका छन्। संक्रमितको उपचारका लागि भैरहवामा ५ शड्ढया आइसियू् र अन्य १७ शड्ढया छन्। तर त्यहाँ जनशक्ति नहुँदा संक्रमितले उपचार पाउन नसकेको चिकित्सक बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा रोहित राई र रेखा भुसालले लेखेका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमण समुदायमा कुन तहसम्म फैलियो ?
डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न राप्रपाको माग